PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-21 - Kusolwa utshwala ngokukubulawa kwabesifazane
Kusolwa utshwala ngokukubulawa kwabesifazane
KUKHONJWA utshwala njengembangela yezigameko zokuhlukunyezwa nokubulawa kwabesifazane ezidlangile.
Kula masonto edlule sekubikwe inqwaba yezigameko ezihlasimulisa umzimba eNingizimu Afrika zokunukubezwa, ukuhlukunyezwa nokubulawa kwesifazane.
Okhulumela iSouthern African Alcohol Policy Alliance uMnuz Maurice Smithers uthe ucwaningo olusanda kweziwa luveza ukuxhumana phakathi kophuzo oludakayo nodlame olubhekiswe kwabesifazane.
“Kuke kwaphathwa uphuzo oludakayo kuba khona nentukuthelo,” usho kanje.
Wenze isibonelo ngodaba lokudlula emhlabeni kukaKarabo Mokoena ofihlwe izolo. Uthe uKarabo nesoka lakhe elingumsolwa uSandile Mantsoe babeqale ukuxabana besendaweni yokujuxuza noma yokucima ukoma.
Ubale nodaba lwabesifazane abasinda kudutshulwa umlingisi owagqama kwiGenerations uMandla Hlatshwayo nakhona kwenzeka endaweni enotshwala.
Selokhu kuqale ukubikwa ngalezo zigameko sekubikwe ngokunukubezwa nokufa kukaPriska Schalk (29), Sthembile Mdluli (37), Mavis Mabala (25), Lerato Moloi, Thapelo Romorotong (26), Manaki Anna, Smangele Mthembu (18), Courtney Peters (3) okusolakala ukuthi uqale wadlwengulwa ngaphambi kokubulawa, Bongeka Phungula (28) waseMayville, eThekwini noPopi Qwabe (24) abadutshulwe babulawa eSoweto. UBongeka ubeqeqeshelwa ukulingisa esikhungweni iDuma KaNdlovu’s Academy for Actors (DNA).
Ngakolunye uhlangothi iSA’s Demographic and Health Survey 2016 Key Indicator iveze ukuthi kubantu besifazane abeneminyaka eqala ku-18 kuya ku-54, ababili kwabayishumi sebeke bahlukunyezwa yizithandwa zabo.
UDuma uthe: “Njengekilasi lika2017 eDNA sidlulisa ukudabuka emndenini ngokushona kukaBongeka. Emasontweni amabili edlule uBongeka uchaze abaningi kwelinye lamakilasi lapho enze khona kahle umsebenzi wakhe wokulingisa ngendlela emangalisayo nomunye uzakwabo. Sizohlala simkhumbula ngokuzithoba nokuzimisela kwakhe. Ubengenaso isikhathi sokuphakamisa isandla kakhulu ebuza kodwa ubesukuma enze umsebenzi wakhe. Uqale nenqwaba yabanye abafundi abasheshe bashiya. Usheshe wasishiya,” kusho uNdlovu.
UBongeka ushone nomngani wakhe uPopi. Isidumbu sikaBongeka sitholakale eTladi, eSoweto ngoMgqibelo odlule kanti esikaPopi sitholwe kuqala eNaledi khona eSoweto. Umlisa obeboshwe ngokufa kwabo ubuye wadedelwa emva kokungahlangani kobufakazi.
Udadewabo kaBongeka, uNksz Thobile Mnyandu, uthe bazomngcwaba ngoMgqibelo futhi abakabi nayo imininingwane ngokushona kwakhe.
“Noma kubuhlungu kodwa okusijabulisayo wukuthi usezongcwabeka udadewethu. Isidumbu sakhe sesisilandile eGoli ngosizo lukaNcanda (Ncanda Funeral). Omunye umuntu ozinikele ukusisiza usomabhizinisi uMathibeli (Calvin Mathibeli). Kumanje silokhu sixhumana naye ukwenza zonke izinhlelo zokungcwaba,” kusho uNksz Mnyandu.
Ethintwa uMathibeli uthe: “Ngenxa yokuthinteka ngokwehlele lo mndeni ngizowusiza. Ungazisile ukuthi uzofihla ngelizayo. Ngizoqinisekisa ukuthi ufihla ngesizotha.”
UMathibeli weCalvin and Family Group ngenyanga edlule unikele ngama-voucher ka-R20 000 egilosa, abenikwa abafundi beSolezwe ngeSonto. Umqhudelwano uvalwe ngoMeyi 18.